Tallaabada Farmaajo waa fal dembiyeed – Muun-gaab | KEYDMEDIA ONLINE
Tallaabada Farmaajo waa fal dembiyeed – Muun-gaab
Wuxuu xusay in Xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka sida, ay hore u furtay Gal dacwadeedka kiiska Ikraan, isla-markaana uu sidaas ku furan yahay kiiska oo aan loo baahney gal cusub oo isla-xeerilaantu qabato.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddoomihii hore ee Gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen (Muun-gaab) soona qabtay xilka Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida, ahna aqoon yahan cilmiga Qaanuunka Dambiyadda, ka heysta shahaadada PHD, ayaa sharci darro ku tilmaamay tallaabada u Farmaajo, ku magacabay guddi baaraya kiiska Ikraan Tahliil oo ku maqan gacanta hoggaankii hore ee NISA.
Muun-gaab, wuxuu sheegay in Ikraan ka tirsaneyd Ciidanka Hay’adda NISA, sidaas daraateedna, qaadista dacwada kiiskeeda ay gaar u tahay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, sida ku cad Qodobka 2-aad ee XHCCQS.
“Xeerilaaliyaha Guud ee CQS wuxuu u dhigmaa Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka wixii la xiriira Xubnaha Ciidamada Qalabka Sida, sida ku cad Qodobka 1-aad ee Isla Xeerka HCCQS”. Ayuu yiri Muun-gaab.
Wuxuu tilmaamay in aysan jiri cid faragelin karta kiiska maxkamadda yaalla oo aan isla Maxkamadda CQS ahayn, wuxuuna sharcidarro ku suntay Guddiga uu magacaabay Farmaajo, wuxuuna ku tilmaamay is hortaag qaawan oo uu ku sameeyay Cadaaladda iyo habsami u socodka dacwada.
“Tallaabada Farmaajo waa fal dembiyeed maadaama lagu dhaawacayo habsami u socodka Caddaalada ee Kiiska Ikraam Tahliil”. Ayuu yiri Guddmiyihii hore ee Gobolka Banaadir.
“Ma jirto meel uu Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka kasoo geli karo kiiska Ikraan, waana inuu faraha kala baxaa, una hoggaansamin Guddiga Villa Somaliya laga soo magacaabay ee sharci darrada ah, haddii kale wuxuu qeyb ka noqonayaa fal dembiyeedka lagu hor istaagayo cadaaladda.” Ayuu yiri Muun-gaab.
Xeer ilaalinta iyo Maxkamadda ciidamada Qalabka Sida, ayuu xasuusiyay in ay saran tahay mas’uuliyad Qaran, wuxuuna ugu baaqay “inay dhaqaajiyaan kiiska Ikraan Tahliil, iyaga oo kaliya ku dhaqmaya sharciga ee aan eegaynin dano gaara”.
Xalay ayay ahayd markii waraaq ka soo baxaday Xaafiiska Farmaajo, lagu magacabay wax loogu yeeray (Guddi Qaran) oo ay hoggaaminayaan Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, kuwaas oo baaraya kiiska gabadha ku maqan gacanta NISA.
Qaali Maxamed Guhaad, oo ah hooyada Ikraan Tahliil Faarax, oo gacanta NISA, ku maqan tan iyo 26-kii June, ayaana hore gaashaanka u duruurtay waraaqda sharci darrada lagu tilmaamay ee uu soo saaray Farmaajo.